५ लाख व्यक्तिलाई रोजगारीः के अब विदेश पलायन रोकिएला त ?
प्रमाणपत्रको धितोमा ७ लाख सहुलियत ऋण
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । दिनानुदिन विदेश पलायन बढिरहेको अवस्थामा संघीय नेपालको महत्वाकांक्षी बजेट प्रस्तुत भएको छ ।
संघीय नेपालको पहिलो बजेट हिजो (मंगलबार) अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरे । बजेटले रोजगारी क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखेर बजेट छुट्याएको छ ।
प्रमाणपत्रको धितोमा कर्जा
उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाख रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ ।
नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पुँजीका रूपमा ‘च्यालेन्ज फन्ड’को व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
५ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप ५ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ । मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत बजेट कार्यक्रममार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गर्न ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’समेत सुरु गरिएको बताए ।
यसका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसबाहेक न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न संसद्को चालू अधिवेशनमै रोजगार प्रत्याभूति विधेयक पेस गर्ने घोषणासमेत गरिएको छ ।
रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना
बेरोजगार जनशक्ति र रोजगारीका अवसरको सूचना आदान–प्रदान गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ ।
श्रम बजारमा मागअनुरूपको सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न छोटो अवधिका लागि निःशुल्क तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइनेछ ।
रोजगारीमा श्रम सम्झौता र सीपलाई अनिवार्य
सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकसँगको श्रम सम्झौताका आधारमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यस्तोमा अदक्ष कामदारलाई पठाइनेछैन ।
श्रम स्वीकृति सेवालाई सहज बनाउन प्रत्येक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार सेवा कार्यालयसमेत स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
विदेशबाट फर्किनेलाई १० लाखसम्म ऋण
विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न १० लाख रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।
बुधबार १६, जेठ ०७५